ဘာကိုမှ တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ မရဘူး – Nyang Media
မေ၊ ၁၊ ၂၀၁၇ တွင်စတင်တည်ထောင်သည်။
ဘာကိုမှ တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ မရဘူး
By : ငြမ်းမီဒီယာ
မတ် 23, 2020
Wan Saw / ဝ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအိုက်စော
ငြမ်းမီဒီယာ – ပါတီသမိုင်းနဲ့ ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒကိုပြောပြပေးပါ။
UAS – ကျနော်တို့ပါတီကို ၂၀၁၀ ဧပြီ (၉) ရက်နေ့မှာ မှတ်ပုံတင်ဖို့စတင်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီ (၂၈) ရက်နေ့ မှာ နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မှတ်ပုံတင် ကျခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီကို ၀ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့ရဲ့ အကျိုးကို ရှေးရှုပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ၀ ပါတီဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့ဒေသမှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးက ရှစ်ခုလောက်ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ အခုလက်ရှိကျနော်တို့ပါတီဥက္ကဌကြီး ဦးခွန် ထွန်းလူက ကျနော်တို့ကိုခေါ်ပြီး ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မှ နယ်မြေအေးချမ်းမယ်၊ နယ်မြေအေးချမ်းမှ ဒေသလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှ နိုင်ငံတော်ကိုလည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီရာ ရောက်မယ်ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက် ပါတီကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ တွေကတော့ စုစုပေါင်း (၇) ချက်ရှိပါတယ်။ နံပါတ်တစ်က ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းအဖြစ် ပို၍ပို၍ခိုင်မာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နံပါတ်နှစ်က တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်မှုပိုမိုခိုင်မာရေး၊ သုံးက ဒို့တာဝန် အရေး သုံးပါးကို အစဉ်တစိုက်မြဲမြံစွာခံယူစောင့်ထိန်းရေး၊ နံပါတ်လေးက မှန်ကန်သောအသိတရားဖြင့် စစ်မှန်သော မျိုးချစ် စိတ်ဓာတ် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး၊ နံပါတ်ငါးက မူဝါဒနှင့်လမ်းစဉ်တူသောတခြားပါတီများနှင့် မဟာမိတ်အဖြစ် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရေး၊ နံပါတ် ခြောက် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အေးချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊ နံပါတ် ခုနစ်က ပြည်သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာ ရေး ပညာရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဘက်စုံမှ အားပေး ကူညီရေး ဆိုတဲ့အချက်ခုနစ်ချက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၀ ပါတီသုံးခုပေါင်းစည်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး။
UAS – ကျနော်တို့ ၀ ပါတီသုံးခုက ကျနော်တို့ရဲ့ ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ နောက်တစ်ခုက ၀ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ၊ ပြီးတော့ ၀ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပေါ့။ အခု အဲဒီပါတီသုံးခုကို ပေါင်းပြီး ၀ အမျိုးသားပါတီ (Wa National Party) ဆိုပြီး တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းကြမှာ။ ကျနော်တို့ ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ နေပြည် တော်ကိုသွားပြီး မှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ခေါင်းဆောင် (၁) (၂) ကိုလည်းရွေးထားပြီးသားပါ။ ကော်မရှင်ကလည်းခေါ်ထားတာရှိတယ်။ မှတ်ပုံတင် ကိစ္စတွေပြီးရင်တော့ ၀ အမျိုးသားပါတီဆိုပြီးဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီတော့မှ ညီလာခံကျင်းပပြီး တာဝန်ခွဲဝေမှုတွေလုပ်ကြရမှာပေါ့။
၀ အထူးဒေသ (၂) ကိုတော့ ကျနော်တို့ ဘာမှမသိဘူးခင်ဗျား။ ကျနော်တို့လည်း တရားဝင်ဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့သဘောထား …″
အဲဒီကျတော့မှ ပေါင်းစည်းထားတဲ့ ဝအမျိုးသားပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ စာအုပ်အနေနဲ့လည်း ထွက်လာမှာပါ။ ကျနော်တို့ ဝပါတီတွေပေါင်းစည်းဖို့ကို ဝကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအတွင်းက ပြည်သူလူထုကလည်း သဘောတူ ထောက်ခံ ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပေါင်းရခြင်းအကြောင်းအရင်းက ဒီလိုရှိတယ်။ အဓိကက ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့။ ဟိုဘက်အထူး ဒေသကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လုပ်နေတာ နှစ်ပေါင်း (၃၀) လောက်ရှိပြီ။ ကျနော်တို့ကလည်းဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကြိုးစားနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါတီက (၃) ခုဖြစ်နေတော့ လုပ်ရကိုင်ရတာမှာ တစ်ခုတည်းလောက် ခရီးမတွင်နိုင် ဘူး။ အထူးဒေသဘက်ကလည်း ပါတီ (၃) ခုပေါင်းဖို့ကို ပြောပါတယ်။ အခုလိုပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းလိုက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူ ပိုဖြစ် တယ်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း ပိုပြီးအင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ ပေါင်းစည်းဖို့လုပ်ကြတာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံလည်း နှစ်ကြိမ်ရှိထားပြီးသားဆိုတော့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားပါသလဲ။
UAS – ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အခုလုပ်နေတဲ့ (၃) ပါတီပေါင်းစည်းပြီးဖြစ်လာမယ့် ၀ အမျိုးသားပါတီ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ဝင်ပြိုင်ရမှာပေါ့။ အဲဒီတော့ ပါတီပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စတွေ၊ မှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးရင် ပါတီညီလာခံခေါ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြမှာပါ။ အဲဒီကျတော့မှာ ဘယ်မြို့နယ်တွေမှာဝင်ပြိုင်မယ်၊ ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နှယောက် ဝင်ပြိုင်မယ် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို တိတိကျကျသိရမှာပါ။ ဥပမာ သံလွှင်အနောက်ဘက်ခြမ်းဆိုရင် ဘယ်နေရာတွေမှာဝင်ပြိုင်မလဲ၊ လားရှိုး လား၊ တန့်ယန်းလား စသဖြင့်ပေါ့။ တန့်ယန်းတော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ကျနော် တို့ အရှေ့ခြမ်းမှာတော့ ၀ တိုင်း ဧရိယာ ထဲမှာ ဆို မက်မန်းရှိတယ်၊ ကျန်တဲ့ ဟိုဘက်က ကျိုင်းတုံတို့၊ တာချီလိတ်တို့၊ နောက်မိုင်းဆတ်ပေါ့။ အဲဒီလို ကျနော်တို့ ၀ တွေရှိတဲ့ နေရာတွေ မှာလည်း ဝင်ပြိုင်ဖို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နှနေရာ ဝင်ပြိုင်မလဲ၊ ဒီကလူတွေပဲ ဟိုမှာသွားပြီးအရွေးခံမလား၊ ဟိုက ဒေသခံ တွေကိုပဲ ဝင်ပြိုင်ခိုင်းမလား စတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပါတီညီလာခံပြီးတော့မှာပဲ အသေးစိတ်တိတိကျကသိရ မှာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (WDP) က အမတ်နေရာ (၆) နေရာ အနိုင်ရ ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာကျတော့ (၁၁) နေရာဝင်ပြိုင်ပြီး (၃) နေရာပဲအနိုင်ရခဲ့တော့ ၂၀၁၀ နဲ့ယှဉ် ကြည့်ရင် ၂၀၁၅ မှာအနိုင်မှုက (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျော့ကျသွားတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။
UAS – ဒီလိုရှိတယ်ခင်ဗျား။ ၂၀၁၅ တုန်းက အားလုံးပေါ့၊ ကျနော်တို့ရှမ်းပြည်နယ် (၂) နေရာရယ်၊ နောက် ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အတွက်လည်းဝင်ပြိုင်တယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတော့ မရလိုက်ဘူးဗျ။ ၂၀၁၀ တုန်းက ဦးစိုင်းပေါင်းနပ်က အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်အရွေးခံရတယ်။ ၂၀၁၅ မှာကျတော့ သူကကျနော်တို့ပါတီကဆိုပေမယ့် သီးသန့် ပုံစံမျိုးနဲ့ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ တယ်။ ပါတီကတော့ပါတီကပဲ၊ ဒါပေမယ့်စည်းရုံးရေးကဏ္ဍတွေမှာကျတော့ ပါတီနဲ့အဆက်အသွယ် နည်းနည်းပြတ်သွားတယ်။ သူက ကျနော်တို့ပါတီက အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ ဒါပေမယ့်သူပြိုင်တဲ့ဟိုပန်မှာ သူ့ညီတွေ သူ့အမျိုးတွေဝင်ပြိုင်တော့ သူ့အနေနဲ့ ပြိုင်ရကျပ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ သူအနိုင်မရခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၅ မှာ အနိုင်ရမှုလျော့ကျသွားရတာက အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းပါတယ်။ နောက် မက်မန်းမှာလည်း ကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ပြိုင်တာမရလိုက်ဘူး။ တန်ယန်းဘက်မှာလည်း ကျတော်တို့ အနိုင် မရခဲ့ ဘူး။ မဲကွဲပြီး ပြန့်သွားတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ် တော်နေရာအတွက်ကတော့ ၂၀၁၀ တုန်းကအနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ကိုယ်စားလှယ်ပဲ ၂၀၁၅ မှာထပ်ပြီးအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု လာမယ့် ၂၀၂၀ မှာ သုံးပါတီပေါင်းထားတဲ့ ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ ဝင်ပြိုင်တော့မှာဆိုတော့ အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေ ထက် အနိုင်ရရှိမှု ပိုရလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော် လင့်ထားပါသလား။
UAS – အဲဒါတော့အခြေအနေအရပါပဲ။ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ၀ အမျိုးသားပါတီဆိုပြီး ဖြစ်လာတဲ့အခါညီလာခံတွေဘာတွေခေါ်ပြီး ဘယ်သူကဘယ်မှာသွားပြိုင်မယ်ဆိုတာတွေညှိနှိုင်းရဦးမယ်။ ဥပမာ သံလွှင် အရှေ့ဘက် ဒေသ တွေဆိုရင် အဲဒီကနယ်ခံတွေ ဝင်မပြိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီကသွားပြိုင်မလား၊ အဲဒါမျိုးတွေကအစ ညှိနှိုင်းရဦးမှာဆိုတော့ တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ၀ တွေအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကအခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ ပါ။ ဟိုဘက် ၀ အထူးဒေသ (၂) ကိုတော့ ကျနော်တို့ ဘာမှမသိဘူးခင်ဗျား။ ကျနော်တို့လည်း တရားဝင်ဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့သဘောထားသိရတာက ပါတီ သုံးခုပေါင်း ရင်ကောင်းပါတယ်၊ မပေါင်းနဲ့လို့လည်းမပြောပါဘူး၊ ပေါင်းပါလို့လည်းမပြောပါဘူး၊ ဒီလိုတော့သူတို့ သဘောထား ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မေးခွန်းက ပါတီသုံးခုပေါင်းပြီးဝင်ပြိုင်တဲ့အခါ အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကထက် အနိုင်ရရှိမှုနှုန်း ပိုများလာမယ်လို့ မျှော်လင့်သလားဆိုတာပါ။
UAS – အော် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား။ အခုလို ၀ ပါတီတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ စုပေါင်းခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့။ အဲဒီ စုပေါင်း ခွန်အားက အရင်ပါတီတစ်ခုစီ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာထက်တော့ ပိုအားသာမှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်က လုပ်ဆောင် နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုက ရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရေး စတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ စုပေါင်း ခွန်အားတွေနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေထဲက နံပါတ် (၉) အချက်မှာ ဒေသတွင်း နေထိုင် ကြသော တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရရှိအောင် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ဆိုတဲ့ အချက် တစ်ခု ပါပါတယ်။ တကယ်ရော အဲဒီလိုအပြည့်အဝရရှိနေကြပြီလား။
UAS – သြော် ဟုတ်ကဲ့။ ဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျနော် တို့ ၀ တိုင်းမှာ (၆) မြို့နယ်ရှိတယ်။ အဲဒီ (၆) မြို့နယ်မှာ ဟိုပန်မြို့နယ်ဆိုလဲ တရားဝင်အုပ်ချုပ်ရေးက ငါးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ဟာအားလုံးက အထူးဒေသ (၂) က လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ အုပ်ချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ တောင်ပိုင်းက မက်မန်းမြို့နယ်ဆိုရင်လည်း ငါးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲတရား ဝင်အုပ်ချုပ်ရေးရှိပြီး ကျန်တဲ့ဟာအားလုံးက အထူးဒေသ (၂) ၀ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျနော် တို့စီမံခန့်ခွဲလို့ရတဲ့ ဧရိယာအတွင်းမှာတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ခုနကရည်မှန်းချက်ကို ကျနော်တို့ပါတီကဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အခုညီလာခံပြီးလို့ရှိရင် ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ဒီမိုကရေစီသဘောတရားတွေ၊ ဖက်ဒရယ်သဘောတရားတွေကို ရှင်းလင်းပြောပြပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကတော့ ပြောပြရင်တော့ သူတို့လက်ခံကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တိတိကျကျသိရအောင် လေ့လာမယ့်သဘောတော့မရှိဘူးခင်ဗျား။
ငြမ်းမီဒီယာ – တရားဝင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံလောက်ဆိုတဲ့ ဧရိယာထဲမှာရော တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့၊ လူ့အခွင့်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတို့ကို အပြည့်အဝဖော်ဆောင်လို့ ရပါသလား။
UAS – နယ်စပ်ဒေသကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးရယ်၊ ပညာရေးရယ်၊ တနိုင်တပိုင် စီးပွားရေး တွေလောက်ပဲ ကျနော်တို့ကဆောင်ရွက်လို့ ရတာပါ။ ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ သိပ်တော့အားမရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လည်း ဆိုတော့ ငါးပုံ တစ်ပုံ လောက်ဆိုတာ လူကဘယ်လောက်မှမရှိဘူးလေ။ ဆိုတော့ဒီဧရိယာအတွင်းလောက်မှာရှိတဲ့လူထုကိုပဲ ကျနော်တို့က နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပြောပြပြီးဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ပေါ့။ အဓိက ကျနော်တို့ ပြောတာက ဒီနယ်မြေဟာတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက စစ်မြေပြင်ပေါ့။ အခုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင် ၀ တိုင်း ဥက္ကဌ က လည်း လုပ်တယ်။ နယ်မြေအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတယ်မယ်၊ အဲဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အသီးအပွင့်တွေကို ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုတွေ အားလုံး ခံစားမယ် ဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို ကျနော် တို့ရှင်းပြတယ်။ အဲဒီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွေ တည်မြဲ အောင် နိုင် ငံတော်ကလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စအပါအဝင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ကျနော်တို့က တစ်ထောင့် တစ်နေရာ ကနေ ပါဝင်လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားရမယ်။ ဒီလိုပဲကျနော်တို့ယုံကြည်တယ်။ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလည်း ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထု ကိုရှင်းလင်းပြောပြတယ်။ နားလည်တဲ့လူလည်းလည် တယ်၊ မလည်တဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့။ နားလည်တဲ့လူတွေကို တော့ ကျနော်တို့ လက်တွဲခေါ်လို့ရတာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၀ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီကို ပူးပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးတယ် လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ၀ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ် ရေးပါတီဘက်က ငြင်းဆိုခဲ့တာကိုလည်းသတိပြုမိတယ်။ အဲဒီအချိန်က ပူးပေါင်းဖို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့လို့လဲ။
UAS – ၀ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီကကျနော် တို့ ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီထက်သက်တမ်းပိုစောပါတယ်။ ပါတီစဖွဲ့တာ သူတို့ပဲစဖွဲ့ခဲ့တာပါခင်ဗျား။ ကျနော်တို့သိရသလောက်ကတော့ သူတို့မူဝါဒအရလို့သိရပါတယ်။ နောက် ဒီနယ်မြေအတွက် လုပ်ကြတဲ့ ပါတီတွေချည်းပဲဆိုတော့ ဘယ်သူပဲလုပ်လုပ် ဘယ်သူပဲနိုင်နိုင် အတူတူပဲဆိုတာမျိုးလည်း ပြောပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၀ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ လက်ရေးစာကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်က စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါ တယ်။ အခု ၀ တိုင်းရင်းသားစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘာ တွေလုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။ ဒေသတွင်းကျောင်းတွေမှာ ၀ တိုင်းရင်းသားစာကိုသင်ကြားနေပြီလား။
UAS – ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ အခု အဲဒီရောမအက္ခရာနဲ့လုပ်တဲ့စာတော့သုံးတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ သိရသ လောက် မြန်မာနိုင်ထဲကိုပထမဆုံးဝင်လာတာ ဒီမွန်ခမာတွေပဲ။ ကျနော်တို့ ၀ တွေကလည်း ဒီမွန်ခမာအနွယ်တွေပါပဲ။ မွန်ခမာတွေက ယိုးဒယားတို့ဘာတို့မှာလည်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။ သမိုင်းအထောက်အထားအရဒီမွန်ခမာတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးတွေ ရှိတာပဲ။ အဲဒီတုန်းကတည်းက စာပေ ရှိခဲ့တာပါ။ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပျောက်ပျက်သွား ခဲ့တယ်။ ၀ တွေလည်းအခြေချ နေထိုင်တာတွေ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်တော့ စာပေတွေဘာတွေ ပျောက်ပျက်ကုန်တာပေါ့။ နောက် အင်္ဂလိပ် ခေတ်မှာ ရောမ အက္ခရာနဲ့လုပ်ထားတဲ့စာပေကို စသုံးခဲ့တယ်။ ဘာသာရေးကိုအခြေပြုတဲ့ ရောမအက္ခရာနဲ့ စာကို စသုံးခဲ့ တာပါ။ အခုကျတော့ ဘာသာရေးနဲ့မနွယ်တော့ဘူး။ ၀ တွေ အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ အတွက် ဒီရောမအက္ခရာနဲ့ ၀ စာပေကို သုံးမှ ရမယ်ဆိုပြီး အခုလည်းသုံးနေကြတာပဲ။ ဗကပ ခေတ်တုန်းကလည်း ဒီရောမအက္ခရာနဲ့စာကိုပဲ သုံးခဲ့ကြတယ်။ ရောမ အက္ခရာ စာရယ်၊ တရုတ်စာရယ် ဒီလို သုံးကြပါတယ်။ ရောမ အက္ခရာနဲ့ စာကို တရုတ်ပြည်က ၀ တွေလည်း သုံးတယ်၊ ယိုးဒယားက ၀ တွေလည်း သုံးတယ်၊ မြန်မာပြည်က ၀ တွေလည်းသုံးတယ်ဆိုတော့ သူကအသုံးပိုတွင်ကျယ်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း သဘောပေါ က်တော့ အခုအဲဒီရောမအက္ခရာနဲ့စာကိုပဲ အသုံးများပါတယ်။ အစကတော့ မြန်မာအက္ခရာနဲ့လုပ် ဖို့ စဉ်းတော့ စဉ်းစားခဲ့ကြ သေးတယ်။ နောက်ပိုင်းဖြစ်မလာဘူး။ အနေအထားအရ၊ အခြေအနေအရပေါ့ဗျာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၀ တိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းလာစေရေးအတွက်စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးရှိသလား၊ နိုင်ငံ ရေးပါတီတွေကရော အဲဒီကိစ္စအတွက် ဘယ်လိုပံပိုးဆောင် ရွက်မှုတွေ ရှိသလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါ။
UAS – ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီဟာက ဒီလိုရှိပါတယ်။ ဗကပ ခေတ်ကတည်းက ဒါကို ၀ စာပေအနေနဲ့သုံးခဲ့ပါတယ်။ ၀ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရင် ဒီ ၀ စာပေနဲ့မှရမယ်ဆိုပြီး ဒီလိုပဲအသုံးပြုလာခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အဖြူရောင်နယ်မြေ၊ ဥပမာ လားရှိုး လောက်မှာဆိုရင် ၀ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ကအသိအမှတ်ပြု အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ တရားဝင်ရှိပါတယ်။
ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်တာက အခုနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်တယ်၊ အတိုင်းအတာ တစ်ခုတော့ တည့်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် …″
သူတို့ကတော့တော်တော် လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့လုပ်လို့လည်း ၀ စာပေ တည်တံ့ လာတာပေါ့။အဲဒီလို အနေအထားတော့ ရှိပါတယ်။ ပါတီအနေနဲ့ တော့ စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ရှိနေတော့ သူတို့လောက် အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်တာမျိုးတော့ သိပ်မရှိဘူး။ အဓိက က တော့ ၀ တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစ ကား၊ စာပေကို မမေ့မလျောရှိဖို့လိုတာပေါ့။ အဲဒီဟာက အရေးကြီးတယ်။ ၀ လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာစ ကား၊ ကိုယ့်စာပေကိုမတတ်ဘူး၊ တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင် ကိုယ့်လူမျိုးကို တန်ဖိုးထား ချစ်ခင် စိတ် ဘယ်ရှိလိမ့်မလဲ၊ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုမချစ်ဘူးဆိုရင် အမိနိုင်ငံတော်ကိုဘယ်ချစ်လိမ့်မလဲ။ အဲဒီအတွက် ၀ တိုင်းရင်းသား ကလေးငယ် တွေကိုတော့ ၀ စာပေသင်ကြားမှုတွေလုပ်ကြပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – တိုင်းရင်းသားအများစုက အခုလက်ရှိမှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်ကို သဘောတူတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ WDP ပါတီရဲ့ သဘောထားကရောဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
UAS – ကျနော်တို့ ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ဆောင်ပုဒ် ကိုက ‘ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ချီတက်မည်’ ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ပါတီက ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေထဲက မိမိလူမျိုး၊ မိမိဒေသ၊ မိမိနိုင်ငံ အတွက် အကျိုးရှိမယ့်အရာတွေကို ယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိပါတယ်။ ဒီခေတ် ဒီအခြေအနေမှာ ဘာကိုမှ တရားသေ ဆုပ်ကိုင် ထားလို့မရဘူး။ ဆိုတော့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ အချက် ကို ကျနော်တို့လည်း မျှော်မှန်းပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိနိုင်ငံမှာ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီး တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်တယ် ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးက တိုင်းရင်းသားတော်တော်များများမှာ ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကိုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
UAS – အဲဒါတော့ရှိတယ်။ ဒီသဘောထားလေးက လူမျိုးတိုင်းမှာတော့ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်၊ နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရင်တော့ ဒီသဘောထားမျိုးက ရှိသည့်တိုင်အောင် ပယ်ဖျောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နားမလည်တဲ့လူတွေ၊ နားမလည်တဲ့အစုလေးတွေမှာတော့ ဒါက တော့ရှိနေဦးမှာပဲ။ အဲဒီနားမလည်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကျနော်တို့တွေ့တဲ့အခါ အတတ် နိုင်ဆုံး ရှင်းပြတယ်၊ လက်တွဲခေါ်တယ်၊ နားလည်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကလည်း (၁၃၅) မျိုး။ (၁၃၅) မျိုးလို့ပြောသာပြောတယ်၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့ (၁၃၅) မျိုးမရှိ ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် ကျနော် တို့ ၀ ထဲမှာ ဆင်းသက်လာကတည်းက ‘ဝ’ က ‘ဝ’ ပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ဥပမာ ကျိုင်းတုံ ဘက်မှာဆို ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆို ‘လွယ်လ’ တို့ ဘာတို့ စတဲ့ ‘ဝ’ လူမျိုးထဲမှာ ထပ်ခွဲလာတော့ လူမျိုးကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်လေ။
တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း တောင်းဆိုတာ တရားသဖြင့် တောင်းဆို တာပါ။ ကျနော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ အဖုအထစ် တွေရှိနေတာက …″
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲခွဲခွဲ ဘယ်လိုပဲများများပါ၊ ဗမာကလူမျိုးကြီးဝါဒလုပ် တယ်လို့ အရင်တုန်းကတော့မြင်တဲ့ လူတွေ မြင်မှာပေါ့၊ အခု တော့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရမြင်လို့မရပါဘူး။ ဗမာကလည်း ‘ငါတို့ လူမျိုးကြီးဝါဒသုံးမယ်’ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်မှန်း သူတို့ ကိုယ်သူတို့ သိတာပဲ။ ကျတော်တို့ အခုဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်နေပြီလေ။ လူမျိုးတိုင်းက တူညီမျှတတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကိုနားလည်နေပြီ။ ကျနော်တို့က ခုနကပြောသလိုခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ အညီ တွေးခေါ်ရမှာပဲ။ လူမျိုးကြီးဝါဒ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပါတီအနေနဲ့ မရှိဘူး၊ မကျင့်သုံးဘူး၊ ပါတီအနေနဲ့မမြင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတာပဲ၊ ဗမာက (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်ဆိုတာ။ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတာ လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးတာမဟုတ်ဘူး။ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကြောင့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ်၊ အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါ အဲဒီ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ ဗမာ က ပဲ ပိုများမှာပေါ့။ ဒါကသဘာဝပဲလေ။ ဒီသဘောပဲလို့ကျနော်တို့မြင်ပါတယ်။ လူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးတယ်လို့တော့ ကျနော်တို့ မမြင်ပါဘူးခင်ဗျား။
ငြမ်းမီဒီယာ – တချို့ကပြောတာရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား တွေထဲမှာလည်း အင်အားများ အုပ်စုကြီးတဲ့သူက အင်အားနည်း အုပ်စုငယ် တဲ့ သူတွေအပေါ် ဖိနှိပ်လွမ်းမိုးတာတွေ ရှိတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။ ဥပမာ ဂျိန်းဖောကချင်တွေက တခြားသော ရဝမ်၊ လော်ဝေါ်၊ လီဆူး၊ လချိတ်၊ ဇိုင်ဝါး စတဲ့ လူမျိုးစုငယ်တွေအပေါ် ဖိနှိပ်လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောကြတာရှိပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
UAS – ကချင်မှာ အဲဒီလိုတော့ ကြားတော့ကြားတယ်။ ကြားတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ ကိုယ့်အနေနဲ့တော့ကြားတဲ့အခါ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရုံကလွဲလို့ ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ သူတို့နယ်မြေ သူတို့ဒေသဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်၊ ဖက်ဒရယ်ကိုလည်းပေးစရာရှိတာပေး လုပ်စရာရှိတာလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့အချင်းချင်း တန်းတူညီမျှမှု ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ အခုနိုင်ငံတော်က ရင်ကြားစေ့ရေးသာပြောတယ်၊ ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်တာက အခုနိုင် ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်တယ်၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့တည့်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ရင်ကြားစေ့ရေးက လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမပြောနဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှာတောင် ခုနကမေးခွန်းထဲမှာ မေးသလို သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ ဒီလိုပဲကျနော် မြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ၀ ထဲမှာတော့အဲဒီလိုမျိုးမရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ၀ မှာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာ သုံးပါတီရှိတယ်။ ဟိုဘက် မှာ လည်း ၀ အထူးဒေသဆိုပြီး UWSP ဆိုပြီးရှိတယ်။ UWSP က သူတို့မှာလည်း ပါတီရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က မှတ်ပုံ မတင်ဘူး။ မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုတာ ကျနော့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်ကမေးရုံမေးကြည့်တာပါ။ အဲဒီအချိန်ကတော့ မတင်သေးဘူး။ ဒါအခုသူတို့တင်ချင်လည်းတင်မှာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ကဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ အခုလက်ရှိ အခြေအနေအတိုင်း ဆက်သွားရင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား။
UAS – အဲဒါလည်းပဲ လူကြီးတွေတော့လုပ်နေတာပဲလေ။ ကျနော်တို့ကတော့ ဖိုရမ်ခေါ်ရင်တက်တယ်၊ ညီလာခံတက်တယ်။ ညီလာခံ မှာ ကဏ္ဍ (၅) ခုရှိတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လုံခြုံရေး၊ မြေယာနဲ့သယံဇာတ။ ဒါမှာလည်း ကိုယ့်နယ်မြေ ဒေသ အတွက် အကျိုးရှိမယ့်ဟာ ကျနော် တို့တင်တာပါပဲ။ တင်တဲ့ဟာထဲမှာ ပါတာရှိသလို မပါတာလည်းရှိတယ်။ ဒါက အများ သဘောဆန္ဒပဲ။ အများဆန္ဒအရဆိုပေမယ့် လူနည်းစုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုလည်း လေးစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့၊ ကျနော်တို့ ဒီလိုသဘောထားရှိပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ရေးကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာက ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးသာ မရဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး။ ဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ၊ အလျော့အတင်းတော့လိုတယ်။ ဒီကပေးစရာရှိပေးမယ်၊ ဒီက ယူစရာရှိယူမယ်။ မတရားသဖြင့်တောင်းတာတို့၊ မတရားသဖြင့်လိုချင်တာတို့မဖြစ်အောင် ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်တော့ စဉ်းစားရ မှာပေါ့။ နိုင်ငံတော်ကလည်း ပေးမယ်ဆိုရင်မနစ်နာပါဘူး၊ တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း တောင်းဆိုတာ တရားသဖြင့် တောင်းဆို တာပါ။ ကျနော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ အဖုအထစ် တွေရှိနေတာက ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ကြာမယ့်သဘောမှာရှိတယ်။ အဲဒီ အဖုအထစ်လေး တွေ ပြေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လွယ်ကူသွားမှာပါ။ နောက်တစ်ခုရှိတာက ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စက ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးက တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအပေါ် သံသယ မကင်းဘူးလို့ ထင်တယ်။ ကျနော်ကြည့်တာ အဲဒီလိုမြင်တယ်။ သူကငါ့ကို ဒီလိုလွှမ်းမိုးရင် ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးတွေလည်း ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးပြောရရင် အနောက်ဘက်က ကုလားကဖိမယ်၊ အရှေ့ဘက်ကလည်း တရုတ်ကဖိမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အခက်အခဲဖြစ်မယ်။ ဒီလို အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာတောင် တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး ကုတ်ဖဲ့နေမယ်ဆိုရင် ဒါမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကို ကျနော်တို့က စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါကိုကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ မြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်တွင်းစစ်ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေက သူတို့အခွင့်အရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ကြရင်း က ဖြစ်တာလို့ သုံးသပ်ကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေနဲ့က စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ဆောက်လို့မရဘူးလို့ ထောက်ပြနေကြတာလည်းရှိတယ်။ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ကျပြန်တော့လည်း ပြင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။ ဆိုတော့ ဒီအခြေအနေတွေကြားထဲမှာ တည်ဆောက်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးက အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား။
UAS – ပြည်တွင်းစစ်ကတော့ ကျတော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ စဖြစ်ခဲ့တာပဲလေ။ ဖြစ်တော့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ သံသယတွေနဲ့ တိုက်ကြရင်း ကြာလာတော့ စစ်မီးကမငြိမ်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေရတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရတာက တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကိုမရလို့၊ ရသင့်ရထိုက် တာကိုမရလို့ပဲ။ အခုလည်းသူတို့ ပြောနေတာပဲ။ ကြားနေရတာပဲလေ။ တရားမျှတမှုမရှိလို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ကလက်နက်မကိုင်ရင် ကိုယ်အဖိခံရမယ်။
တပ်မတော်ကဖြေရှင်းတိုင်း ပြီးနိုင်သလားဆိုတော့ မပြီးနိုင်ဘူး။ မပြီးနိုင်လို့ပဲ ပြည်တွင်းစစ်က ဒီနေ့အထိရှိနေတာ လေ။ အဲဒီတော့ …″
လက်နက်ကိုင်မှ အဖိမခံရမှာဆိုပြီး သူလည်းကိုင်၊ ကိုယ်လည်းကိုင်ဆိုတော့ ပြည်တွင်းစစ်က မပြီးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ကြောင့်ပဲ ကျနော်တို့နိုင်ငံချွတ်ခြုံကျရတာ အားလုံးအသိပဲ။ အခုကျနော်တို့ ဖိုရမ်သွားတက်တယ်၊ ညီလာခံ သွားတက် တယ် ဆိုရင် ကဏ္ဍ (၅) ခုထဲက လုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံရဲ့ပြသနာ ပေါင်းစုံကို စစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းမလား၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဖြေရှင်းမလား ဆိုတာ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်။ ထစ်ခနဲရှိ လက်နက်နဲ့ ပဲဖြေရှင်းနေမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းစစ် က မပြီးနိုင် တော့ဘူး။ လက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်အစား နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေး နွေးအဖြေရှာတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ ဒီလိုပဲဆွေးနွေးကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့ ပြောမရဆိုမရ ညှိနှိုင်းမရတဲ့ အခြေအနေမှာ လက်နက်နဲ့ပဲ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီလို သဘောထားတွေလည်းရှိတယ်။ တကယ်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့သားသမီးတွေပါ။ ပေးသင့် ပေးထိုက် တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကို မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန် ပေးလိုက်လို့ရတာပဲ။ နိုင်ငံတော်အတွက် လည်း ဘာမှ ထိခိုက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ငြိမ်းချမ်းရေးမရရင် ကိုယ့်ဒေသဘာဖြစ်သွားမလဲ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံဘာဖြစ်သွားမလဲ စသဖြင့် ဒီလိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တိုင်းရင်းသား …″
ဥပမာ ပြည်နယ် အသစ်ပေါ်ထွန်းရေးတို့ ဘာတို့ စသဖြင့်ပေါ့။ ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။မပေးဘူး ဆိုရင်လည်း ဒီလိုပဲ မျောသွားမှာပဲဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်။ ဆိုတော့ ခုနကပြောသလို ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဒီဘက်က တပ်မတော် က လည်း စိုးရိမ်စိတ်နဲ့၊ ဒီလိုစစ်နဲ့မဖြေရှင်းရင်လည်း မဖြစ်ဘူး။ ဥပမာ ရခိုင်ကိစ္စတို့၊ ကိုးကန့်ကိစ္စတို့ကိုကြည့်လေ။ တပ်မတော် က ဒီလိုသာ မဖြေရှင်းရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ တပ်မတော်က ဖြေရှင်းတိုင်း ပြီးနိုင်သလား ဆိုတော့ မပြီးနိုင်ဘူး။ မပြီးနိုင်လို့ပဲ ပြည်တွင်းစစ် က ဒီနေ့အထိရှိနေတာလေ။ အဲဒီတော့ အရှေ့အနောက် ဖိနေလို့ အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေ ကြားမှာ ရောက်နေတာ တောင် အမှတ်မရှိဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကုတ်ဖဲ့တိုက်ခိုက်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့လည်း ကြာရင်မတွေးရဲစရာပါပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – WDP ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ဒေသတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပါတယ်။ ၀ ဒေသက ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေကို ပန်ခွန်ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရာမှာ အရည်အသွေး မပြည့်မီလို့ ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီး နေတဲ့အကြောင်း ဒေသခံတွေကိုကိုးကားပြီး သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ WDP ပါတီအနေနဲ့ ဒေသခံတွေအကျိုးအတွက် ဥပဒေအရစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးရှိပါသလား။
UAS – အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေကျနော်တို့မှာရှိပါတယ်။ အဲဒီလမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော် တစ်ခုမှတ်မိတယ်။ လမ်းခင်းတာမှာ အဆင့်ဆင့်လုပ်ရတာတွေရှိတယ်တဲ့၊ လမ်းခင်းဖို့အတွက် မြေတူးထားပြီး ကျောက် မထည့်ခင်မှာလာကြည့်ပြီး အဲဒီလိုတွေတင်လိုက်တာလို့ ပြောကြတာပဲ။ ကျနော်တို့ အစည်းအဝေး တွေမှာတော့ ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက အတင်းအကြပ်လုပ်ယူလို့ ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဘက်က …″
ပါတီအနေနဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ကြီးကြပ်ပေးဖို့၊ ပြောကြဖို့ပေါ့။ ဒါတွေက သက်ဆိုင်ရာလုပ် ကိုင်ကြတဲ့သူတွေရှိတာကိုး။ ဥပမာ ဟိုပန်ဆို ခရိုင်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ သူတို့လုပ်ကြပါတယ်။ ခုနက ပန်ခွန်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူ့ကဏ္ဍနဲ့ သူ သူ့အဖွဲ့နဲ့သူရှိပါတယ်။ ခုနကပြောသလို လမ်းခင်းတဲ့လုပ်ငန်းကို သိပ်နားမလည်တဲ့သူတွေက ပြောတာတော့လည်း ရှိချင်ရှိ မှာ ပေါ့။ မပြီးပြတ်သေးတာတွေကို ပြီးပြတ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာ တွေလည်း ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ အဲဒါတွေကိုတော့ ကျနော် အသေးစိတ်တော့ မသိဘူး။ ကျနော်က လားရှိုးမှာနေတာဆိုတော့ ဟိုပန်ဘက်ကို သိပ်မရောက်ဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – တခြားဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်လည်း ပြောပေးပါဦး။
UAS – အဓိကကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ ခုနကပြောသ လိုပါပဲ၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကိုအဆုံးအဖြတ် ပေးမှာက ငြိမ်းချမ်းရေး ပါပဲ။ မငြိမ်းချမ်းရင် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် ကျနော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ စီးပွားရေး လူမှုရေးမပြေလည်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ် ငြိမ်းချမ်း မလဲဆိုပြီး တချို့ကပြောကြတာရှိတယ်။ အဲဒါကိုကျနော်တို့အနေနဲ့ သိပ်လက်မခံပါဘူး။ ကျနော်တို့ငြိမ်းချမ်းပြီးမှ အဲဒီဟာတွေကို လုပ်လို့ရမယ်။ ကျနော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ အများပြည်သူနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်း ဒီလိုပဲကျနော်တို့ပြောပါတယ်။ ကျနော် မြိတ်အထိသွားပြီး ပါတီရဲ့သဘောထားကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာ ပြည်သူတချို့က ‘ ငြိမ်းချမ်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောနေတာ ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ’ ဆိုပြီးပြောကြတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒါ ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလား ကြောင်း ပြသဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလို လားတဲ့သဘောထားကို ဖော်ထုတ်ပြသပေးဖို့ ဒီလိုပဲပြောခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေဘက်က ဒီလိုသဘောထားတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခု ကျနော်ကြည့်ရတာ ပြည်သူလူ ထုကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အား ထက်သန် မှု ပိုရှိလာတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထား ဆန္ဒက အရေးကြီး ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်း ရေးဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက အတင်းအကြပ်လုပ်ယူလို့ ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဘက်က EAO အဖွဲ့ တွေကလည်း ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထား၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒတွေကို မြင်လာမယ်၊ နိုင်ငံတော် ဘက်က လည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒတွေကို ပံ့ပိုးပေးလာမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရလာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရရင် ကိုယ့်ဒေသဘာဖြစ်သွားမလဲ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံဘာဖြစ်သွားမလဲ စသဖြင့် ဒီလိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတိုင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်ရလာမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပဲကျနော်ပြောချင် ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tags: WDP, ငြိမ်းချမ်းရေး, တိုင်းရင်းသား, ဖက်ဒရယ်, ဝအထူးဒေသ, ဟိုပန်, အစိုးရ
အန်အယ်ဒီက စစ်တပ်မကြိုက်တာ မလုပ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ပုံ ပေါက်နေတယ်
လူငယ်တွေတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့လိုက်တာ
မေ 30, 2020
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒီကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားရင်တော့ …
မေ 25, 2020
လူတွေဟာ အစားအသောက်နဲ့ မကင်းနိုင်ကြသလို လိင်ကိစ္စနဲ့လည်း မကင်းနိုင်ဘူး
ဇွန် 25, 2020
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝန်းရံမှု၊ ပေးဆပ်ခဲ့မှုတွေ အလဟဿဖြစ်ကုန်တယ်
COVID -19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တစ်ဦး – အပိုင်း(၁)
မေ 09, 2020
ရခိုင်ပြည်ဟာ ငရဲပြည်နဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမှာ
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 06, 2020
ကိုလိုနီခေတ်မှာတောင် ရရှိခံစားနေခဲ့ကြတဲ့ အခွင့်အရေးကို လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်
ဒေသခံလူမှုဘဝများကို ထိခိုက်နေသည့် ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံအရေး ဝန်ကြီးချုပ် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမည်
နေပြည်တော် NLD အစည်းအဝေး ဦးဝင်းထိန် အုပ်စု မှ လူအများစု အစည်းအဝေးခန်းမထဲက ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှားဖြန့်
တပ်ချုပ် နဲ့ တပ်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကို တရားစွဲသွာမယ်လို့ NLD ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ပြောတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
နေပြည်တော် တပ်ထောက်ခံပွဲ သီတဂူဆရာတော် ကြွရောက်မည် ဟု သတင်းအမှားဖြန့်
မဲ စာရင်းအမှား ရွေးကော်နဲ့သာဆိုင်ဟု ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ပြောသယောင် ဖြန့်ချိနေတဲ့ သတင်းအမှား
ငြမ်း မီဒီယာသည် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သတင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်သည်။
ခိုင်မာအားကောင်းသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး၊
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအသီးသီး၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် တန်းတူညီမျှမှုရရှိရေး၊
လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးစံနှုန်းများ မြင့်မားလာစေရေး၊
တရားဥပဒေ၏ မျှတသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို ပြည်သူတိုင်းခံစားခွင့်ရရှိရေး၊
ငြိမ်းချမ်း၍သဟဇာတဖြစ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရေး တို့အတွက် မှန်ကန်မျှတသောသတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူသိရှိအောင် တတ်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်သွားရန်မှာ ငြမ်းမီဒီယာ ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
No. 1/18,Padauk Yeik Nyein St, Thamine
Copyright © 2020. All rights reserved by Nyang Media.
Powered by Web Design Myanmar